Tokony ho voamarina ve ny mpitantana ny tranonao?
Janoary 24, 2022 0 Namaky 4 aho
Raha mitady hanakarama mpitantana trano vaovao ianao dia misy zavatra maro tokony hodinihina. Avy amin'ny fitakiana karama, fanamarinana fitantanana ny trano amin'ny andraikitry ny asa, ireto misy fanontaniana dimy tokony hapetrakao alohan'ny hanakarama olona.
Matetika ny mpitantana trano no manara-maso tranobe na birao maromaro indray mandeha, ka mahatonga ny asany ho sarotra kokoa. Ireto misy fanontaniana dimy tokony hapetrakao amin'ny tenanao raha te hahita ny mpitantana trano tonga lafatra ianao.
1. Inona avy ireo mari-pankasitrahana?
Nandalo fanadinana nokarakarain'ny Fikambanan'ny Fitantanana ny Fampiasana any Amerika ireo tompon'andraikitra nahazo mari-pankasitrahana. Ny FMAA dia manolotra ambaratonga roa amin'ny fanamarinana: Certified Professional Facility Manager sy Certified Master Facility Manager.
Ny fanendrena CPFM dia mitaky ireo mpiadina handalo ny taranja fototra momba ny fitantanana ny trano ao amin'ny CMFA sy ny fanadinana andiam-panadinana momba ny lohahevitra toy ny fitantanana ny fiarovana, ny tetibola, ny maha olona, ​​ny fitantanana ny fanorenana ary ny sehatra hafa mifandraika amin'ny fitantanana ny trano. Ny mpifaninana dia tsy maintsy mamita 300 ora amin'ny fampandrosoana matihanina ihany koa mba hahazoana io fanamarinana io.
Mba hahazoana ny fanendrena CPMM, ny kandidà dia mila mandalo fitsapana mitovy amin'ny takiana amin'ny CPFM. Na izany aza, mila mampiseho fahaiza-manao amin'ny sehatra fanampiny izy ireo toy ny fitantanana ny tetikasa, ny fitantanana ny risika ary ny faharetana. Ireo mpifaninana mamita ireo taranja sy fanadinana ireo dia afaka manantena hahazo $50k isan-taona.
2. Ohatrinona ny traikefa ananan'izy ireo?
Ny kandidà tonga lafatra dia hanana traikefa an-taonany maro amin'ny fitantanana tranobe na birao lehibe. Midika izany fa hain'izy ireo ny manao laharam-pahamehana ny asa sy ny fitantanana ny olona. Zava-dehibe ny manamarika fa ny mpitantana trano sasany dia manomboka amin'ny traikefa latsaky ny telo taona. Na izany aza, tsy mahazatra azy ireo ny mahazo traikefa sarobidy mandritra ny internship na toerana vonjimaika.
3. Miara-miasa tsara amin'ny hafa ve ny Kandidà?
Matetika ny mpitantana trano no miara-miasa akaiky amin'ny injeniera, mpanao mari-trano, mpiantoka,
ary matihanina hafa. Raha mitady olona afaka miara-miasa tsara amin'ny hafa ianao dia mitadiava mpilatsaka hofidina efa niasa tamina vondrona samihafa tao anatin'ny orinasa iray. Ny mpitantana trano tsara dia hahatakatra izay ilain'ny vondrona tsirairay sy ny antony nanaovana ny fanapahan-kevitra sasany.
4. Afaka miatrika toe-javatra mahasosotra ve izy ireo?
Ny mpitantana trano sasany dia mety ho voaantso hiatrika ny fahatapahan-jiro, ny loza voajanahary, na ny hamehana mpiasa. Mitaky fisainana haingana sy fandraisana fanapahan-kevitra ireo toe-javatra ireo. Mitadiava kandidà mampiseho hery mpitarika fahaiza-manao rehefa miatrika toe-javatra mampiady saina.
5. Misy zavatra hafa tokony ho fantatro momba azy ireo ve?
Mitadiava kandidà efa voaporofo fa nahomby. Mangataha fanovozan-kevitra avy amin'ny mpampiasa taloha ary jereo ny tsikera an-tserasera. Azonao atao koa ny manadihady kandidà vitsivitsy alohan'ny hisafidianana iray.
Karazan'ny Fanamarinana Mpitantana Facility
Misy karazany roa ny mari-pankasitrahana momba ny fitantanana trano. Ny Association Management Facilities dia manolotra iray. Ny International Facility Managers Association dia manome ny iray hafa. Samy manolotra fandaharana mitovy ireo fikambanana roa ireo, ka na inona na inona programa fidinao, dia afaka matoky ianao fa nifidy ny lalana marina ianao.
Ireto ny fahasamihafana misy eo amin'ireo programa roa ireo:
• CPFM – Ny programa voamarina FMAA dia natao ho an'ny olona efa manana mari-pahaizana licence raharaham-barotra na saha hafa. Ny FMAA dia manolotra mari-pahaizana Associate of Science in Facility Management miaraka amin'ny fanamarinana azy. Mba hahazoana ny mari-pahaizana ASFM, ny mpianatra dia tsy maintsy maka adiny 12 farafahakeliny any amin'ny oniversite na oniversite nahazo mari-pahaizana. Ny mpianatra dia mamita ny sisa amin'ny fianarany amin'ny alàlan'ny programa fanofanana FMAA.
• CPMM – Mifantoka kokoa amin’ny fahaiza-manao azo ampiharina ny fandaharan’asa voamarina IFMA. Mahazo mari-pankasitrahana amin'ny sehatra efatra fototra ny olona izay mamita ny mari-pahaizana Matihanina voamarina ao amin'ny IFMA momba ny asa fanorenana: ny fandrindrana ny toerana, ny asa fanorenana; fikojakojana; ary ny fahombiazan'ny angovo. Ankoatra izany, mianatra momba ny teknolojia farany ampiasaina amin'ny indostria izy ireo.
Ireo programa roa ireo dia ahitana fampianarana an-dakilasy, fanazaran-tena an-tanana ary fanadinana an-tsoratra. Rehefa vita ny programa dia afaka mangataka ny hipetraka amin'ny fanadinana fanamarinana ny kandidà.
Ny andraikitry ny mpitantana trano
Ny mpitantana trano iray dia manara-maso ny lafiny rehetra amin'ny tranobe na birao. Tafiditra amin'ny asan'izy ireo ny fanaovana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny fitazonana ny fenitra ambony momba ny fiarovana sy ny filaminana. Ireto misy vitsivitsy amin'ireo andraikitry ny mpitantana trano:
1. Mitana ny fenitra fiarovana
Ny mpitantana ny trano dia miantoka fa ny lafiny rehetra amin'ny trano iray dia mifanaraka amin'ny torolàlana hentitra momba ny fahasalamana sy fiarovana. Ohatra, ataon'izy ireo antoka fa tsy misy akora simika mampidi-doza eo akaikin'ny loharano na toerana fikarakarana sakafo. Manara-maso ny kalitaon'ny rivotra ihany koa izy ireo ary mitazona ny rafitra fanamainana ho madio.
2. Miaro ny mpiasa
Ny mpitantana ny trano dia tsy maintsy miaro ny mpiasa amin'ny ratra. Midika izany fa ny toeram-piasana dia mahafeno ny fepetra takian'ny ergonomika, manome jiro mety, ary mametraka mpamono afo. Tokony hanolotra fivoahana vonjy maika sy kitapo vonjy maika ihany koa izy ireo.
3. Miantoka ny fahombiazan'ny angovo
Manara-maso ny fampiasana angovon'ny trano ny mpitantana trano. Tokony hanao fisafoana tsy tapaka izy ireo ary hiantoka fa mandeha tsara ny rafitra HVAC. Tokony hametraka fitaovana mitsitsy angovo toy ny takamoa sy thermostats koa izy ireo.
4. Manara-maso ny fikojakojana
Mila manara-maso tsy tapaka ny fitaovana ny mpitantana ny trano mba hahazoana antoka fa miasa tsara izy io. Tokony hihazona firaketana an-tsoratra mirakitra an-tsoratra izay olana sedraina mandritra ny fanamboarana ihany koa izy ireo.
5. Manara-maso ny fiarovana ny trano
Ny mpitantana ny trano dia tokony hanao izay hahazoana antoka fa azo antoka ny trano. Tokony hanara-maso ireo toerana fidirana izy ireo ary hiantoka fa mihidy ny varavarana rehefa tsy ampiasaina. Tokony hampiofana mpiasa ihany koa izy ireo hamantatra ny hetsika mampiahiahy ary hitatitra avy hatrany izay olana rehetra.
Ny asa fitantanana trano dia manana lalan'asa maro samihafa azo alaina. Raha toa ny mpitantana trano sasany dia mety manam-pahaizana manokana amin'ny faritra iray toy ny lisitry ny fitaovana fikojakojana indostrialy, ny hafa dia mety misafidy ny hifantoka amin'ny taranja maro. Na inona na inona fomba fidinao, ny mpitantana trano dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fitazonana ny olona ho azo antoka sy ho salama.
More on: Management | Science | Energy
$100M hamolavola fitsaboana antibody amin'ny aretina autoimmune mahery sy tsy fahita firy Management|
Previous Ny Minisiteran'ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Aviation Bahamas dia manendry an'i Latia Duncombe ho tale jeneraly mpisolo toerana
Manaraka Minnesota dia maniry ny ho toerana halehanao amin'ny Andro fialan-tsasatra nasionaly